प्रिय अपमानजनक ग्राहक | Martech Zone
शुक्रबार, डिसेम्बर 14, 2007 सोमबार, सेप्टेम्बर 24, 2012 Douglas Karr
म पक्का छु कि सबैजनासँग ग्राहकहरुको यी प्रकारहरु मध्ये एक छ। पछिल्ला दशकमा मैले साँच्चिकै आशिष्‌ पाएको छु जुन मसँग ग्राहकहरू थिए जसले मसँग काम गरेकोमा मजा लिए। मैले हेरें कि केही कम्पनीहरूले कसरी उनीहरूको ग्राहकहरूसँग व्यवहार गर्छन् र म यो घृणा गर्छु। मैले सँधै उच्च स्तरको सेवाको लक्ष्य राखेको छु। मैले अधिक-वचन र अधिक डेलिभर गरेको छु। तर, geesh… कि एक ग्राहक… यदि म तिनीहरूलाई एक पत्र मात्र लेख्न सक्दछु…
प्रिय अपमानजनक ग्राहक,
पछाडि जब तपाइँले हामीलाई तपाइँको विक्रेताको रूपमा छान्नुभयो, तपाइँले धेरै प्रश्नहरू सोध्नुभयो र रातो टेपको माईलहरूको अगाडि निर्दयतापूर्वक हामीलाई तान्नुभयो। तपाईं निर्णय गरे कि हामी तपाईंको लागि सही उत्पादन हौं। अब जब तपाइँले हामीलाई छान्नु भएको हो, यो हाम्रो गल्ती होइन कि तपाइँ अब हामीले देखाउने धेरै सुविधाहरू र प्रकार्यहरूसँग दु: खी हुनुहुन्छ जुन हामीले तपाईंलाई देखाउनुभयो र तपाइँले माया गर्नुभयो। हामी झूट बोलेनौं। हामीले गलत वर्णन गरेका छैनौं। तपाईले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नुभयो।
हामी 100% भेट्यौं भन्ने तथ्यलाई गर्व गर्न जारी हुनेछ आफ्नो आवश्यकताहरू र सबै भन्दा बढि आफ्नो समयसीमा। हामीले तपाईंसँग गरेको यो प्रतिज्ञा यही हो जुन हामीले राख्यौं।
तपाइँ के विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको बाबजुद पनि, हाम्रो ध्यान तपाईंको व्यवसायलाई ध्वस्त पार्नको लागि होईन। हाम्रो लक्ष्य भनेको यो ग्रहमा सब भन्दा ठूला समाधानहरू विकास गर्न जारी राख्नु हो। हामीलाई थाहा छ कि हामी सुविधाहरू, स्थिरता, उपयोगितामा सबै अन्य विक्रेता भन्दा बढी छ, र हामीसँग अन्य कम्पनीको तुलनामा आकस्मिकताका थप तहहरू छन्।
जबकि हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूले उनीहरूको ईमेल वा फोन नम्बर प्रस्तुत गर्दैनन्, हामी हाम्रा प्रत्येक कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईलाई परिचय गराउँदछौं, तपाईंलाई हाम्रो पूर्ण सम्पर्क जानकारी प्रदान गर्दछौं, र २24/7 व्यक्तिगत समर्थन छ। यसको उद्देश्य तपाईलाई मध्यम आकार दिनको लागि तपाईलाई माध्यम प्रदान गर्नु होइन, यो त्यहाँ छ किनकि हामी तपाईंको, तपाईंको कम्पनी र तपाईंको ग्राहकहरूको ख्याल राख्छौं।
हरेक ग्राहक हाम्रो # 1 प्राथमिकता हो। जबकि यो स्वीकार्य नहुन सक्छ यदि तपाईं हामीसंग अधिक पैसा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं यसको कदर गर्नुहुन्छ जब अरूले हामीसँग धेरै पैसा खर्च गरिरहेका हुन्छन्।
हामी लगातार उद्योग, प्रविधि, र उपभोक्ता आधारमा प्रवृत्तिहरू अवलोकन गरिरहेका छौं ताकि तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। यसले हामीलाई रणनीतिक दर्शनहरू र उत्पादन ब्याकलगहरू सुविधाहरू र सुधारहरू प्रदान गर्दछ जुन अर्को बर्ष पछि पछाडि फराकिन्छ। लोकप्रिय धारणाको विपरित, हामी सोफेमा वर्ल्ड अफ वारक्राफ्टमा बसिरहेका छैनौं र अर्को उजुरीको लागि पर्खिरहेका छैनौं। हामी काम गरिरहेका छौं, हामी लगानी गरिरहेका छौं, र हामी प्रत्येक दिन सुधारहरू उत्पादन गरिरहेका छौं। हामीसँग हाम्रो कामको तालिका ठीक ठाउँमा छ। नयाँ सुविधाको तत्काल रिलीजको लागि तपाईंको मागहरूको योजनाहरूमा प्रतिक्रियाहरू छन् जुन हामी पहिले नै काम गरिरहेका छौं र हाम्रो ठाउँमा लक्ष्यहरू छन्। बुझ्नुहोस् कि हामी तपाईंको माग अरूलाई राख्न सब भन्दा राम्रो गर्नेछौं - तर यसले हाम्रो संगठनको तालिका, लक्ष्य र सबैको अपेक्षाहरू समायोजन गर्न समय लिनेछ।
हिजो सम्पन्न हुनका लागि सुविधाका लागि चिच्याउनुले त्यस सुविधाको गुणस्तर वा विश्वसनीयता सुधार गर्दैन। हामीसँग प्रक्रियाहरू, परीक्षण, र गुणवत्ता आश्वासन तपाईंको ठाउँमा छन् सुरक्षा, हाम्रो होइन।
यदि, प्रत्येक चोटि जब हामी तपाईलाई कल गर्दछौं, तपाईको एकमात्र लक्ष्य भनेको हामीलाई अपमान गर्नु र हामीलाई पतित बनाउनु हो - हामी तपाईंलाई कल गर्न र तपाईंको ब्यापार परिणाम सुधार गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्ने हाम्रो तरिकाबाट बाहिर जाने छैनौं। यदि तपाइँले हामीलाई अवसर प्रदान गर्नुभएन भने हामी तपाइँबाट सिक्न सक्दैनौं। हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न हाम्रो तरिकाबाट बाहिर जान छोड्नेछौं किनकि हामी हाम्रा कर्मचारहरूको ख्याल गर्छौं कि हामी उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको देख्न चाहँदैनौं। बरु हामी आफ्नो समय ग्राहकहरूको साथ खान्छौं जसले विशेषज्ञतालाई पहिचान गर्छन् जुन उनीहरूले लगानी गरेका थिए र साझा लक्ष्यका लागि हामीसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छन्।
हाम्रो व्यवसाय वर्ष बर्ष दश गुणा बढेको छैन किनकि हामी अयोग्य छौं र हामीले के गरिरहेको छु बुझ्दैनौं। हामी उद्योग परिवर्तन गर्दैछौं र यसको लागि पहिचान भइरहेको छ। परिवर्तनको लागि जोश, स्रोत र समय आवश्यक छ। हामीसँग धैर्य राख्नुहोस् र तपाईं कहिल्यै पछुताउनु पर्दैन। हाम्रो ग्राहकहरु हामी संग काम गर्न सक्छन् वा ती हामी संग लड्न सक्छन्, तिमीलाई लाग्छ को अधिक फाइदा हुन्छ?
तपाइँका कर्मचारीहरुलाई खुसी राख्नु तिनीहरूको वफादारी र उत्पादकता सुधार गर्न को लागी साबित भएको छ। के तपाई आफ्नो अनुप्रयोग विक्रेता संग केहि फरक छ भन्ने लाग्छ?
विक्रेता तपाईलाई चयन गर्न पर्याप्त स्मार्ट थियो
टैग: APIappifierअनुप्रयोग प्रोग्रामिंग ईन्टरफेसb2cgamificationJSONप्रतिष्ठा प्रबन्धनबाँकीसाबुनविभाजित परीक्षणपरीक्षणप्रयोगकर्ता अवधारणा प्रतिक्रियावर्डप्रेस आईफोनवर्डप्रेस आईफोन अनुप्रयोगXML
रहिरहने शक्ति: तपाईं कतिन्जेल रहनुहुनेछ?
समानान्तर र चितुवा: व्यवसाय म्याक प्रयोगकर्ताको लागि एक हुनु पर्छ
डिसेम्बर १, २०१ 15 2007:२:7 अपराह्न
मलाई यो मन पर्छ। म पहिलो दुई अनुच्छेद केहि कोश गरीरहेछु:
"पछाडि जब तपाइँले हामीलाई तपाइँको विक्रेताको रूपमा छान्नुभयो, तपाइँले धेरै प्रश्नहरू सोध्नुभयो र रातो टेपको माईल मार्फत हामीलाई निर्दयतापूर्वक घिसार्नुभयो, हामीलाई हाम्रो सम्बन्धित उत्तरदायित्वहरूको विस्तृत रूपमा सूची बनाउनुभयो र तपाइँसँग सहमत हुनुभएको कामको पूर्ण विवरण नभएसम्म होइन। तपाईं निर्णय गर्नुहोस् कि हामी तपाईंको लागि सही समाधान थियौं।
अब जब तपाइँले हामीलाई चुन्नु भयो, यो हाम्रो गल्ती होइन कि तपाइँको व्यवसायिक समस्याहरू परिवर्तन भएको छ र तपाइँ अब ती धेरै सुविधाहरू र कार्यहरूसँग दुखी हुनुहुन्न जुन हामीले पारस्परिक रूपमा सहमत गर्‍यौं समस्याहरूको समाधान गर्नुहुने थियो जब तपाइँले उनीहरूलाई परिभाषित गर्नुभयो। हामीले झूट बोलेनौं। हामीले गलत प्रस्तुत गरेका छैनौं। तपाईंको परिस्थिति र वातावरण परिवर्तन भयो।
अब हामी एक टोलीको रूपमा पुन: समूहित हुनुपर्दछ र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ
कसरी पुनः आकार परिवर्तन व्यवसाय को लागी एक व्यावहारिक समाधान को विकास गर्न को लागी …………………
डिसेम्बर १, २०१ 15 2007:२:9 अपराह्न
मलाई खुशी छ कि तपाईंले PG-13 संस्करण पोस्ट गर्नुभयो। हाह। म यी केहि दर्जन बाहिर केहि ग्राहकहरु लाई पठाउन चाहान्छु। यो एक रचनात्मक कमन्स इजाजतपत्र अन्तर्गत छ? उत्कृष्ट लेख।
डिसे 16, 2007 मा 2: 04 AM
Gosh, यो सबै यती वास्तविक देखिन्छ। लगभग तपाई जस्तो बस त्यो टेलिफोन पुन: नामा through्गबाट ​​बाँचिरहनु भएको थियो ... '-)
डिसे 16, 2007 मा 10: 14 AM
ईमेलहरू पनि चार्टबाट टाढा छन्! 🙂
डिसे 16, 2007 मा 6: 03 AM
हो, मसँग केही ग्राहकहरू थिए जो दुःखी थिए जब म तिनीहरूको ट्राफिक र बिक्री दोब्बर भयो ... पछि तपाईंलाई भन्नुहोस् कि उनीहरूलाई भारतको कम्पनी थाहा छ जुन १०००००० दैनिक आगन्तुकहरूलाई २$ डलरको लागि प्रदान गर्दछ।
डिसे 17, 2007 मा 8: 59 AM
यसलाई एडेमा छोड्नुहोस् कोडको सरल, प्रख्यात भागमा यसलाई राख्न स्यूडोकोड!